သိချင်လို့ပါ။ — MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော် webs.com မှာရေးထားတဲဘလော့ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို co.nr ဒိုမိန်းနဲချိတ်ချင်လိုပါ။.................
မသိလိုပါနော် ပြောပေးကြပါ ။
Co.nr မှာက အခုရက်ပိုင်းယူလို့မရဘူးထင်တယ်... .tk မှာအရင်စမ်းသုံးကြည့်ပါလား?
Co.nr Link လေးပါ
.tk link ပါ ... လွယ်ပါတယ်.. လုပ်ကြည့်ပါ.
Dot tk မှာလုပ်တာ ဒီ URL တောရတယ်
နောက်မှာပဲ co.nr ကလုပ်ကြည်မယ်။
free domain ကဆိုရင် co.nr , .tk , br.ma , co.cc ,cz.cc, တို ့ရှိမယ်ထင်တယ်ဗျ တခြားဟာတွေလည်းရှီဦးမယ်
www.webs.com က custom domain ချိန်းဖို့အတွက်တော့ ဖရီးမပေးပါဘူး။ အဲလိုချိန်းချင်ရင်ပိုက်ဆံပေးရမယ်ဗျ။ co.cc လို .tk လို ဒိုမိန်းနေ url forward လုပ်ရင်တော့ရနိုင်တယ်။
ဖရီး ဒိုမိန်း ချိန်းလို့ရတဲ့ ဆိုဒ်ဆိုရင် တစ်ခုမှမရှိပါဘူး ... Free ဆိုရင် Hosts တွေတောင် www.yourname.freehostia.com, www.yourname.webs.com ဆိုပြီးတော့ ပဲရမှာပါ.. ဖရီးပြောင်းလို့ရတာတော့မရှိပါဘူး... အနည်းဆုံးတော့ $40 လောက်တော့ပေးရမှာပါ.. တစ်နှစ်ကို .. ခွိ
blogspot နဲ့ yolasite ဆိုရင် custom domain ဖရီးချိန်းခွင့်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဒိုမိန်းကို ၀ယ်ပဲ၀ယ်လာ ဖရီးပဲယူလာလာ ပေါ့ဗျာ။
webs.comနဲ့wix.com တို့ကတော့ custom ဒိုမိန်းချိန်းခွင့်အတွက် တစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက်ကျတယ်ရေးထားတာမြင်လို့ပါ။